प्रदर्शनकै दिन कति कमायो ऐश्वर्यले ? कलाकार र दर्शकबाट कस्तो पायो प्रतिक्रिया ?(भिडियो) - Medianp
काठमाडौँ, १० कात्तिक । बिहीबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ले सुरुवाती व्यापार आक्रामक गरेको छ । छठ पर्वको अवसर पारेर बिहीबारबाट मुलुकभर प्रदर्शनमा ल्याइएको नायक रमेश उप्रेतीको निर्माणमा डेब्यु रहेको ऐश्यर्वले व्यापार राम्रो गरेको निर्माण टिमको भनाइ छ ।
उनीहरुका अनुसार प्रदर्शनको पहिलो दिन बिहीबारको बिहानी शो मा ८० देखि ९० प्रतिशत अकुपेन्सी मिलेको थियो भने त्यसपछिका शो मल्टिप्लेक्सका हल क्युएफएक्स, बिग मुभिज, क्युज सिनेमा, एफक्युब लगायत गोपी कृष्ण, गुण सिनेमा, अष्टनारायण पिक्चर्स लगायत मोफसलको मुख्य स्टेसन पोखरा, नारायणगढ, हेटौडा र पूर्वका स्टेसनमा हाउसफुल भएको थियो ।
उक्त चलचित्रले काठमाडौं उपत्यकामा २८ लाख ८६ हजार एक सय सात रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने मोफसलमा १९ लाख ३० हजार पाँच सय ७५ को ब्यापार गर्न सफल भएको वितरक डिसीएनले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो दिनको टोटल ग्रस कलेक्सन ४८ लाख १६ हजार ६ सय ८२ गरेको छ । विशेष गरि मेकिङको चर्चा पाएको चलचित्र ऐश्वर्यको संवादले दर्शकलाई निकै हसाएको छ ।
चलचित्र हेर्न पुगेका कलाकार, पत्रकार तथा दर्शकहरुले ऐश्वर्य राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले ऐश्वर्यले नेपाली चलचित्रलाई उचाइ र स्तरीयता दिन सफल भएको बताए ।
दिवाकर भट्टराईको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको सो चलचित्रमा रमेश उप्रेती, केकी अधिकारी, प्रशान्त ताम्राकार र दीपिका प्रसाईं, विकाश खतिवडा, अर्जुन श्रेष्ठ, निर्मल शर्मा, केशव भट्टराई, अर्जुन जंग शाही लगायतको अभिनय रहेको छ ।
र्‍यालीमा हस्तक्षेप गरेपछि झापा तनावग्रस्त, प्रहरीद्वारा दर्जनौं गोली प्रहार
नारायणगढ–मुग्लिन सडकका चार पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु